ကျောင်းသား မိဘ၊ အုပ်ထိန်းသူ၊ ပြည်သူများသို့ မေတ္တာရပ်ခံချက် - Latest Myanmar News
July 8, 2020 Latest Myanmar News သတင်းများ 0
ပညာရေးဝန်ြ်ကီးဌာန “၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ်” မိဘ၊ အုပ်ထိန်းသူ၊ ပြည်သူများသို့ မေတ္တာရပ်ခံချက်
ကျောင်းသားဦးရေ တိုးတက်များပြားလာခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ ကျောင်းအပ်နှံနှုန်းမြင့်မားလာခြင်း ကြောင့်လည်းကောင်း၊ ထပ်ကျော့ ကျောင်းအပ်နှံခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ ကျောင်းသုံးပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်များကို လုံလောက်စွာ ဖြန့်ဝေပေးလိုပါသဖြင့် မြို့နယ်အလိုက် သတ်မှတ်နယ်မြေများတွင်သာ ကျောင်းအပ်နှံကြပါရန်။
ငွေကြေး သို့မဟုတ် လက်ဆောင်ပစ္စည်းများကို ကျောင်းအုပ်၊ ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ ဝန်ထမ်းများအား ပေးအပ်ခြင်း မပြုပါရန်။
မိဘများအနေဖြင့် မိမိသားသမီးအား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်၍ တာဝန်ယူတာဝန်ခံဆောင်ရွက်တတ်သော တီထွင်ကြံဆနိုင်စွမ်းရှိသည့် လူသားကောင်းများ ဖြစ်လာစေရန်အတွက် ကျောင်းအုပ်၊ ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ပူးပေါင်းဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ပါရန်။
ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ ကျောင်းတက်မှန်ရေးနှင့် အိမ်စာမှန်မှန်လုပ်ဆောင်ရေးအတွက် မိဘများက ကြီးကြပ်၍ ကျောင်းအုပ်၊ ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ပူးပေါင်းပေးပါရန်။
ပညာသင်ကာလအတွင်း စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း (၄)ကြိမ် စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ပြီး နှစ်ဆုံးစစ်ဆေးခြင်းကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် လည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ အတန်းအလိုက် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းပြုလုပ်ပြီးလျှင် ဖြည့်ဆည်းသင်ကြားပေးခြင်းကို
နှစ်ဆုံး စစ်ဆေးခြင်းမတိုင်မီအထိလည်းကောင်း ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သဖြင့် ကျောင်းအုပ်၊ ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါရန်။
ကျောင်းသန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ကျောင်းဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်တတ်စေရေး မိမိသား၊ သမီးများကို တိုက်တွန်းအားပေးပါရန်။
မိဘဆရာအသင်းနှင့် ကျောင်းဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပါရန်။
ကျောင်းထွက်သူ လုံးဝမရှိစေရေးနှင့် အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းအဆင့်များသို့ အဆင့်ဆင့်ဆက်လက်ပညာသင်ယူနိုင်ရေးအတွက် မိဘများကပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ပေးပါရန်နှင့် မျှဝေခြင်းဆိုင်ရာအစီအစဉ်တွင်လည်း ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပါရန်။
မူးယစ်ဆေးဝါး တားဆီးကာကွယ်ရေး၊ အရက်၊ ဘီယာ၊ စီးကရက်၊ ကွမ်းယာ မသုံးစွဲရေး ကျောင်းအုပ်၊ ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါရန်။
ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းလိုက်နာရေး ကျောင်းအုပ်၊ ဆရာ၊ ဆရာမ များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါရန်။
ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော လူနေမှုပုံစံများ စွဲမြဲဆောင်ရွက်တတ်ရန် အသိပညာပေးရေး ကျောင်းအုပ်၊ ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါရန်။
မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေးရေးကို ကျောင်းအုပ်၊ ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ပါရန်။
ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ (TV,Video,Phone,Computer) ဂိမ်းစွဲလမ်းမှုပပျောက်စေရေး ကျောင်းအုပ်၊ ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါရန်။
ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းစည်း(mask)နှင့် မျက်နှာအကာ (Face Shield) များကို ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း စနစ်တကျတပ်ဆင်ပြီး သင်ယူနိုင်ရေးပူးပေါင်းကူညီရန်။
ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ လက်ကိုရေနှင့်ဆပ်ပြာအသုံးပြု၍ စက္ကန့်(၂၀)ကြာအောင် လိုအပ်သည့်အခါတိုင်း စနစ်တကျ မကြာခဏ ဆေးကြောရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်။
ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ လက်ဖြင့် နှာခေါင်း၊ ပါးစပ်၊ မျက်လုံးများ မကိုင်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းကူညီရန်။
ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ နှာစေး၊ ချောင်းဆိုး၊ ကိုယ်အပူချိန်မြင့်မားလျှင် ကျောင်းသိုိ့မလာစေဘဲ နီးစပ်ရာ ကျန်းမာရေး ဆေးခန်း၊ ဆေးရုံသို့ သတင်းပို့ရန်နှင့် ဆေးကုသမှုခံယူရန်။
မိဘများအနေဖြင့် ကျောင်းဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အကြံပြုကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံးသို့ အသိပေးတိုင်ကြားလိုပါက ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် ၁၃၊ နေပြည်တော် (သို့မဟုတ်) dpsoffice@moe.edu. mm သို့ ပေးပို့တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်။
ပညာရေးဝနျွကီးဌာန “၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသငျနှဈ” မိဘ၊ အုပျထိနျးသူ၊ ပွညျသူမြားသို့ မတ်ေတာရပျခံခကျြ
ကြောငျးသားဦးရေ တိုးတကျမြားပွားလာခွငျးကွောငျ့လညျးကောငျး၊ ကြောငျးအပျနှံနှုနျးမွငျ့မားလာခွငျး ကွောငျ့လညျးကောငျး၊ ထပျကြော့ ကြောငျးအပျနှံခွငျးကွောငျ့လညျးကောငျး၊ ကြောငျးသုံးပွဋ်ဌာနျးစာအုပျမြားကို လုံလောကျစှာ ဖွနျ့ဝပေေးလိုပါသဖွငျ့ မွို့နယျအလိုကျ သတျမှတျနယျမွမြေားတှငျသာ ကြောငျးအပျနှံကွပါရနျ။
ငှကွေေး သို့မဟုတျ လကျဆောငျပစ်စညျးမြားကို ကြောငျးအုပျ၊ ဆရာ၊ ဆရာမမြား၊ ဝနျထမျးမြားအား ပေးအပျခွငျး မပွုပါရနျ။
မိဘမြားအနဖွေငျ့ မိမိသားသမီးအား ပူးပေါငျးဆောငျရှကျတတျ၍ တာဝနျယူတာဝနျခံဆောငျရှကျတတျသော တီထှငျကွံဆနိုငျစှမျးရှိသညျ့ လူသားကောငျးမြား ဖွဈလာစရေနျအတှကျ ကြောငျးအုပျ၊ ဆရာ၊ ဆရာမမြားနှငျ့ ပူးပေါငျးဆှေးနှေးဆောငျရှကျပါရနျ။
ကြောငျးသား၊ ကြောငျးသူမြား ကြောငျးတကျမှနျရေးနှငျ့ အိမျစာမှနျမှနျလုပျဆောငျရေးအတှကျ မိဘမြားက ကွီးကွပျ၍ ကြောငျးအုပျ၊ ဆရာ၊ ဆရာမမြားနှငျ့ ပူးပေါငျးပေးပါရနျ။
ပညာသငျကာလအတှငျး စဈဆေးအကဲဖွတျခွငျး (၄)ကွိမျ စဈဆေးမညျဖွဈပွီး နှဈဆုံးစဈဆေးခွငျးကို ၂၀၂၁ ခုနှဈ၊ မတျလတှငျ လညျးကောငျး၊ သကျဆိုငျရာ အတနျးအလိုကျ စဈဆေးအကဲဖွတျခွငျးပွုလုပျပွီးလြှငျ ဖွညျ့ဆညျးသငျကွားပေးခွငျးကို
နှဈဆုံး စဈဆေးခွငျးမတိုငျမီအထိလညျးကောငျး ဆောငျရှကျမညျဖွဈသဖွငျ့ ကြောငျးအုပျ၊ ဆရာ၊ ဆရာမမြားနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျပါရနျ။
ကြောငျးသနျ့ရှငျးရေးလုပျငနျးမြားနှငျ့ ကြောငျးဖှံ့ဖွိုးရေးလုပျငနျးမြားတှငျ ပူးပေါငျးပါဝငျဆောငျရှကျတတျစရေေး မိမိသား၊ သမီးမြားကို တိုကျတှနျးအားပေးပါရနျ။
မိဘဆရာအသငျးနှငျ့ ကြောငျးဖှံ့ဖွိုးရေးလုပျငနျးမြားတှငျ ပူးပေါငျးပါဝငျဆောငျရှကျပါရနျ။
ကြောငျးထှကျသူ လုံးဝမရှိစရေေးနှငျ့ အလယျတနျး၊ အထကျတနျးအဆငျ့မြားသို့ အဆငျ့ဆငျ့ဆကျလကျပညာသငျယူနိုငျရေးအတှကျ မိဘမြားကပူးပေါငျးပါဝငျ ဆောငျရှကျပေးပါရနျနှငျ့ မြှဝခွေငျးဆိုငျရာအစီအစဉျတှငျလညျး ပူးပေါငျးပါဝငျဆောငျရှကျပါရနျ။
မူးယဈဆေးဝါး တားဆီးကာကှယျရေး၊ အရကျ၊ ဘီယာ၊ စီးကရကျ၊ ကှမျးယာ မသုံးစှဲရေး ကြောငျးအုပျ၊ ဆရာ၊ ဆရာမမြားနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျပါရနျ။
ယာဉျအန်တရာယျကငျးရှငျးရေးနှငျ့ ယာဉျစညျးကမျး၊ လမျးစညျးကမျးလိုကျနာရေး ကြောငျးအုပျ၊ ဆရာ၊ ဆရာမ မြားနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျပါရနျ။
ကနျြးမာရေးနှငျ့ညီညှတျသော လူနမှေုပုံစံမြား စှဲမွဲဆောငျရှကျတတျရနျ အသိပညာပေးရေး ကြောငျးအုပျ၊ ဆရာ၊ ဆရာမမြားနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျပါရနျ။
မြိုးဆကျပှားကနျြးမာရေးဆိုငျရာ အသိပညာပေးရေးကို ကြောငျးအုပျ၊ ဆရာ၊ ဆရာမမြားနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျ ပါရနျ။
ကြောငျးသား၊ ကြောငျးသူမြား (TV,Video,Phone,Computer) ဂိမျးစှဲလမျးမှုပပြောကျစရေေး ကြောငျးအုပျ၊ ဆရာ၊ ဆရာမမြားနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျပါရနျ။
ပါးစပျနှငျ့နှာခေါငျးစညျး(mask)နှငျ့ မကျြနှာအကာ (Face Shield) မြားကို ကြောငျးသား၊ ကြောငျးသူမြား ညှနျကွားခကျြမြားအတိုငျး စနဈတကတြပျဆငျပွီး သငျယူနိုငျရေးပူးပေါငျးကူညီရနျ။
ကြောငျးသား၊ ကြောငျးသူမြား လကျကိုရနှေငျ့ဆပျပွာအသုံးပွု၍ စက်ကနျ့(၂၀)ကွာအောငျ လိုအပျသညျ့အခါတိုငျး စနဈတကြ မကွာခဏ ဆေးကွောရေးအတှကျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရနျ။
ကြောငျးသား၊ ကြောငျးသူမြား လကျဖွငျ့ နှာခေါငျး၊ ပါးစပျ၊ မကျြလုံးမြား မကိုငျရေးအတှကျ ပူးပေါငျးကူညီရနျ။
ကြောငျးသား၊ ကြောငျးသူမြား နှာစေး၊ ခြောငျးဆိုး၊ ကိုယျအပူခြိနျမွငျ့မားလြှငျ ကြောငျးသို့မလာစဘေဲ နီးစပျရာ ကနျြးမာရေး ဆေးခနျး၊ ဆေးရုံသို့ သတငျးပို့ရနျနှငျ့ ဆေးကုသမှုခံယူရနျ။
မိဘမြားအနဖွေငျ့ ကြောငျးဖှံ့ဖွိုးရေးလုပျငနျးမြားအတှကျ အကွံပွုကွပါရနျ မတ်ေတာရပျခံအပျပါသညျ။ ပညာရေး ဝနျကွီးဌာန၊ ဝနျကွီးရုံးသို့ အသိပေးတိုငျကွားလိုပါက ဒုတိယအမွဲတမျးအတှငျးဝနျ၊ ပညာရေးဝနျကွီးဌာန၊ ရုံးအမှတျ ၁၃၊ နပွေညျတျော (သို့မဟုတျ) dpsoffice@moe.edu. mm သို့ ပေးပို့တိုငျကွားနိုငျပါသညျ။